» महांकालचौर, मीनभवन, अनामनगर र खुमलटार क्षेत्रमा मेलम्चीको पानी, तपाईंको घरमा आयो ?
महांकालचौर, मीनभवन, अनामनगर र खुमलटार क्षेत्रमा मेलम्चीको पानी, तपाईंको घरमा आयो ?
२०७७ चैत्र १५, आईतवार १७:३५
तस्बीर : अनामनगरस्थित सिंहदरवारको कार्यालय रहेको भवनमा मेलम्चीको पानी
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न स्थानमा आजबाट मेलम्चीको पानी आउने भएको छ । उपत्काका सीमित ठाउँमा मात्रै अहिले पानी आउन थाल्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले जनाएको छ ।